Izinsizakalo ezintsha ze-iTwin Cloud for Infrastructure Engineering Twins - amaGeofumadas
Amawele wedijithali angena ngokujwayelekile: izinkampani zobunjiniyela kanye nabanikazi bezisebenzi. Faka izifiso zamawele wedijithali
I-SINGAPORE - The Unyaka ku-Infrastructure 2019- Okthoba 24, 2019 - I-Bentley Systems, Incorporated, umhlinzeki womhlaba wonke wesoftware ebanzi kanye nezinsizakalo zefu zamawele edijithali, wethule izinsizakalo ezintsha zamafu zamawele wedijithali wobunjiniyela wengqalasizinda. Amawele edijithali ayizethulo zedijithali zezimpahla ezibonakalayo kanye nemininingwane yazo yobunjiniyela, evumela abasebenzisi ukuthi baqonde futhi balingise ukusebenza kwabo emhlabeni wangempela kuwo wonke umjikelezo wabo wempilo. Ngempela, amawele edijithali "ahlala eluhlaza" enza ngcono i-BIM ne-GIS nge-4D.
UKeith Bentley, umsunguli kanye nesikhulu esiphezulu kwezobuchwepheshe, uthe: "Namuhla" inkathi yamawele edijithali "iyaqhubeka, futhi ijubane layo liyashesha nsuku zonke. Abasebenzisi bokuqala esisebenze nabo sebevele bangena ezikhundleni zobuholi emnothweni omusha wamawedi wedijithali, ekufezeni izinto ezinhlelweni zabo zebhizinisi nakumamodeli abo webhizinisi. Izinzuzo ezitholwe ngokufaka esikhundleni sokuphuma komsebenzi okwenziwe amashumi eminyaka futhi okunqanyuliwe okwenziwe ephepheni, ngamawele avulekile, aphile, athembekile futhi angapheliyo amakhulu kakhulu. Ukujoyina lokho nge-ecosystem emisha ngokusebenzisa amapulatifomu omthombo ovulekile kwakha amandla angenakuvinjwa wokushintsha kwengqalasizinda. Angisikhumbuli isikhathi esijabulisayo sokusebenza kwengqalasizinda noma seWindows Systems. "
Izinsizakalo ezintsha efwini le-Digital Twins
Izinsizakalo ze-ITwin zivumela izinkampani zobunjiniyela ukudala, ukubona ngamehlo engqondo nokuhlaziya amawele edijithali wamaphrojekthi ezingqalasizinda kanye nempahla. I-iTwin Services ihlobanisa okuqukethwe kobunjiniyela zedijithali kwamathuluzi wokuqamba we-BIM nemithombo eminingi yedatha, kufinyelela “ukubona kwe-4D” kwamawele ledijithali, kanye nokurekhodwa kwezinguquko zobunjiniyela ohlelweni lwephrojekthi / lwempahla, ukuhlinzeka ngohlelo irekhodi elifanele lokuthi ngubani owashintsha nini futhi nini. Amaqembu wobunjiniyela asebenzisa i-iTwin Services ukwenza ukubuyekezwa nokuqinisekiswa kwedatha yokwakha nokukhiqiza imibono yolwazi / yokuqamba. Abasebenzisi bezicelo zokuklama i-XNUMX bangafaka insiza ye-iTwin Design Ukubuyekezwa kokubukiswa kokudalwa kwe-ad hoc, futhi amaqembu wephrojekthi esebenzisa i-ProjectWise angangeza insizakalo yeTwin Design Ukubuyekezwa ekusebenzeni kwawo kwedijithali ukwenza lula amawele edijithali iphrojekthi ngokuvamile.
IPlantSight ingumnikelo owenziwe ngokuhlanganyela yiBentley Systems kanye ne-Nokia, enikeza abanikazi bezinkampani kanye nonjiniyela babo ikhono lokwenza amawele edijithali aphilayo futhi asebenzayo ezinqubo zokusebenza. I-PlantSight isekela ukusebenza, ukugcinwa, kanye nobunjiniyela ukufinyelela idatha enokwethenjelwa nenembile yamawele edijithali ngendlela yokuntywila, kufaka phakathi i-P &ID, amamodeli we-3D nedatha ye-IoT.
Inikeza umbono oyingqayizivele wangempela kwimodeli yolwazi evumelekile, isiza ubuhlakani bendawo, umugqa wokubona nokuqwashisa ngomongo. I-PlantSight yathuthukiswa ngokuhlangene ngabakwaMissor ne-Nokia isebenzisa iTwin Services futhi itholakala ngokuthengisa kunoma yiziphi izinkampani.
I-iTwin Immersive Asset Service ivumela abanini-opharetha abasebenzisa i-AssetWise ukuvumelanisa idatha yokusebenza kwempahla nokuhlaziywa kokusebenza kumongo wamawele abo edijithali, okwenza imininingwane yobunjiniyela ifinyeleleke kubabukeli abaningi abasebenzisi ngokusebenzisa okuhlangenwe nakho kwabo umsebenzisi ogxile futhi enembile. I-iTwin Immersive Asset Service ikhombisa "amaphuzu abucayi" womsebenzi nezinguquko esimweni sempahla ngokuhamba kwesikhathi, okuholela ekwenzeni izinqumo ezisheshayo futhi ezingcono ezisiza ekugcineni ukuthuthukisa ukusebenza kwe izimpahla kanye nenethiwekhi.
Amawele wedijithali angena endaweni yesehlakalo
Iqiniso elihlala livela lempahla eyake yasebenza ngaphambili bekunzima ukulithimba ngokwe digitally futhi lihlale livuselelwa. Ngaphezu kwalokho, imininingwane ehambisanayo yobunjiniyela, ezinhlotsheni zayo eziningi zefayela ezingahambisani nokushintshwa okungaguquki, ngokujwayelekile ibilokhu kungukuthi "idatha emnyama", ayitholakali noma ayisebenziseki. Ngezinsizakalo zamafu ezidijithali, i-Bentley isiza abasebenzisi ukudala nokukhetha amawele edijithali ukuthuthukisa ukusebenza nokunakekelwa kwempahla yangempela, amasistimu nezinqubo zokwakha, ngokusebenzisa ukubona nge-4D kwe-XNUMXD nokubonakala kokuhlaziya.
Engqungqutheleni Ka-2019 Yonyaka Wezingqalasizinda, kwaqhutshwa intuthuko edijithali kumaphrojekthi angama-24 wokugcina ezigabeni eziyi-15, ezindaweni emazweni asondele kwayi-14 asuka kwezokuhamba, amanethiwekhi amanzi kanye nezitshalo zokwelapha, ezitshalweni zamandla, izitshalo zensimbi kanye nezakhiwo Sekukonke, abaphakanyisiwe abangama-139 ezigabeni eziyi-17 basho inhloso yamawele wedijithali ezintweni ezintsha ezisetshenziswe kumaphrojekthi abo, ukwanda okukhulu kwamagama angama-29 uma kuqhathaniswa nowe-2018.
Imibono mayelana ne-Digital Twins isebenza
Enkulumweni yezobuchwepheshe, uKeith Bentley ujoyine isigaba nabamele abavela kwaSweco naseHatch, ekhombisa imibono yamawele engqalasizinda edijithali asebenza.
Sweco Ngokwe-digitally kuhlanganiswe iphrojekthi yesitimela samakhilogremu esingamakhilomitha ayisishiyagalolunye yedolobha laseBergen eNorway. Ukunwebeka kohlelo olukhona kwalungiswa ngokuphelele ngamamodeli we-3D BIM, kusuka kwezinye izifundo kuya kuklamo wobunjiniyela obunemininingwane. Ukusetshenziswa kwezinsizakalo ze-iTwin kuvume ukuthi iSweco ilandelele izinguquko ngokuzenzakalelayo futhi inciphise amaphutha, ivumela ukubonwa nge-4D.
Hatch uqedele ukwenzeka, ukwenzeka kanye nobunjiniyela obunemininingwane yokufakwa kwe-sulfuric acid eDemocratic Republic of the Congo. Isoftware yokuqamba izitshalo ka-900 ivumele ithimba leprojekthi ukuthi liklame amawele e-digital aphelele futhi ahlakaniphile ngemininingwane ebabazekayo, ihambisa izinqubo ezisezingeni lobunjiniyela phezulu njengengxenye yomzamo wokumodela we-3D, uma uqhathanisa nezinqubo Ikhwalithi esekwe kwimidwebo yendabuko. UHatch ukwazile ukunciphisa ukwanda komkhiqizo ngemuva kokwethulwa kwezinyanga eziyisithupha kuya ngesonto.
Microsoft Wakha ama-prototypes wamawele edijithali endlunkulu yakhe e-Asia eSingapore nasekhampasi yakhe eRedmond. Iqembu leMicrosoft Real Estate and Security lisebenzisa indlela eya kwiDijithali yokwakha impilo ukuze bakwazi ukusebenza kahle ngokwakha, ukwenza inzuzo, ukwaneliseka kwabasebenzi, ukukhiqiza nokuphepha. Imizamo ye-Microsoft yokwakha izethulo zedijithali zezimpahla ezibonakalayo ezifana nezakhiwo isuselwe kuMicrosoft Azure Digital Twins, insizakalo ye-IoT esiza izinhlangano ukuthi zenze amamodeli wedijithali ephelele wezindawo zomzimba. I-Azure Digital Twins ikhishelwe umphakathi ku-2018 futhi manje isamenywa ngamakhasimende we-Microsoft kanye nabalingani emhlabeni wonke, kufaka phakathi ne-900 ngezinsizakalo zayo ze-iTwin Services. Izinkampani lezi zisebenza ngokubambisana ukwenza amawele edijithali wezinsiza ezintsha zeMicrosoft eSwitzerland.
Amawele we-digital ecosystem
Zombili i-iTwin Services kanye nePlantSight zenzelwe isizinda semithombo evulekile iModel.js ngamawele edijithali, aqala ukusungulwa ngo-Okthoba we-2018 futhi afinyelela inguqulo yayo ye-1.0 ngoJuni we-2019. Isizathu esiyinhloko sokuvula ikhodi iModel.js ukukhuthaza uhlelo lwamasiko emvelo lwabasunguli be-software abangamawele, abanikazi, onjiniyela kanye nabahlanganisi bedijithali.
Omunye walabo abathuthukisa isoftware ye-ecosystem yi-vGIS Inc., ebesebenzisa iModel.js ukuhlanganisa isixazululo esingokoqobo (XR) ibe ngamawele engqalasizinda yezothutho lwedijithali. Ukusebenza kwaso okuxubekile kwesipiliyoni kuhlanganisa amamodeli wokwenza iphrojekthi neqiniso, enkundleni, ngesikhathi sangempela. Abasebenzisi abasensimini bangabona usizo lwezinto ezingaphansi, njengamapayipi namakhebula, ahlanganisiwe ekujongeni kwabo komhlaba wangempela. Abasebenzisi bamane bakhombe izinto ngamadivayisi abo eselula ukubona izakhi zephrojekthi kulomongo.
U-Alec Pestov, umsunguli kanye ne-CEO ye-vGIS, uthe: "Ipulatifomu le-iModel.js lingumthombo omuhle kakhulu wokuthuthukisa nokuhlanganisa amathuluzi nezinsizakalo ezingezelelwe, njengeqiniso elithuthukile elingokoqobo kanye nekhambi leqiniso elihlanganisiwe elinikezwe i-vGIS. Siyakuthanda ukusebenzisana okuhle ngezinsizakalo ze-iTwin kanye nendlela yokuthuthuka yamahhala yokufinyelela kuleyo nhlanganisela efanelekile, futhi sethemba ukuthi sizokwandisa amandla ethu okubambisana, ngezinsizakalo ze-iTwin «.
Ukuchazwa kwamawele wedijithali
Amawele wedijithali ayizimpawu zedijithali zezimpahla nezinhlelo zomzimba ngokomongo wendawo yawo ezungezile, lapho imininingwane yawo yobunjiniyela igeleza, ukuqonda nokubonisa ukusebenza kwawo. Njengezimpahla zezwe langempela abazimele, amawele ledijithali ahlala eshintsha. Ziyavuselelwa ngokuqhubekayo kusuka emithonjeni eminingi, kufaka phakathi izinzwa kanye nama-drones, ukumela umbuso ngesikhathi esifanele noma izimo zokusebenza zezimpahla zezinto zokwakha zangempela zomhlaba. Ngempela, amawele ledijithali, - ngokuhlanganisa i umongo wedijithali futhi i izingxenye zedijithali ne ukulandelana kwezikhathi kwedijithali, I-BIM ne-GIS phambili nge-4D.
Izinzuzo zamaDijithali amawele
Amawele wedijithali avumela abasebenzisi ukuthi babuke yonke impahla, kusiphequluli sewebhu, kwithebhulethi noma ngamahedisethi engokoqobo ahlanganisiwe; ukukwazi ukuqinisekisa isimo, ukwenza ukuhlaziya nokukhiqiza ulwazi lokubikezela nokwenza kahle ukusebenza kwempahla. Abasebenzisi bangakha ngokwamakhadi ngaphambi kokwakha ngokomzimba, ukuhlela nokususa imisebenzi yokulungisa ngaphambi kokuyenza emhlabeni wangempela. Manje banesoftware abanayo ukubona ngeso lengqondo amakhulukhulu ezimo, basebenzise ithuba lokufunda ngomshini ukuqhathanisa ezinye izindlela zokwakha noma amasu wokulungisa nokwenza kahle emikhakheni eminingi. Ukubona kanye nokuqondiswa kokuqukethwe kwemininingwane yobunjiniyela kuholela ekwenzeni izinqumo ezinolwazi olunzulu nokubamba iqhaza kwababambe iqhaza kulo lonke umjikelezo wempilo wezimpahla.
Mayelana neBentley iTwin Services
Izinsizakalo ze-ITwin zivumela amaqembu weprojekthi nabahlinzeki bokuphathelene ukudala, ukubona ngeso lengqondo kwi-4D futhi kuhlaziye amawele edijithali ezimpahla zengqalasizinda. Izinsizakalo ze-ITwin zivumela abaphathi bemininingwane yedijithali ukuthi bafake idatha yobunjiniyela eyakhiwe ngamathuluzi ahlukahlukene wokuklama kumawele wedijithali bukhoma futhi bawavumelanise ne-real modelling nenye idatha ehlobene, ngaphandle kokuphazamisa amathuluzi abo noma izinqubo zabo zamuva. Abasebenzisi bangabuka futhi balandelele izinguquko zobunjiniyela emugqeni wesikhathi wephrojekthi, banikeze irekhodi elithembekile lokuthi ngubani owashintsha nini futhi nini. Izinsizakalo ze-ITwin zinikezela ngemininingwane engenzeka kulabo ababandakanyeka ekwenziweni kwezinqumo kuyo yonke inhlangano nomjikelezo wempilo wezimpahla. Abasebenzisi abathatha izinqumo ezinolwazi olungcono, balindele futhi bagweme izinkinga ngaphambi kokuba ziphakame, futhi baphendule ngokushesha ngokuzethemba okuphelele, okuhumusha njengokulondolozwa kwezindleko, ukutholakala kwensiza okuthuthukisiwe, umthelela omncane kwezemvelo nokuphepha okuthuthukile.
Mayelana ne-900 Systems
I-900 Systems ingumhlinzeki ohola umhlaba wonke wezixazululo zesoftware onjiniyela, abakhi bezakhiwo, ochwepheshe bezokuma komhlaba, abakhi nabasebenza ngokuphathelene nokwakha, imisebenzi yokwakha nengqalasizinda, kubandakanya imisebenzi yomphakathi, imisebenzi yomphakathi, izitshalo zezimboni kanye amadolobha edijithali. Vula izinhlelo zokusebenza zokumodela ezisuselwa ku-900 MicroStation nezinhlelo zayo ezivulekile zokulingisa okusheshayo ukuhlanganiswa komklamo; I-ProjectWise yakho ne-SYNCHRO inikeza ukusheshisa ukulethwa kweprojekthi; futhi i-AssetWise yayo inikezela ukusheshisa ukusebenza kwempahla nokusebenza kwenethiwekhi. Ukumboza ubunjiniyela bezingqalasizinda, izinsizakalo ze-900's iTwin's lithuthuka ngokuyisisekelo i-BIM ne-GIS ngamawele ledijithali e-4D.
I-Bentley Systems isebenzisa ngaphezu kozakwabo be-3.500, ikhiqiza imali etholakala njalo ngonyaka eyizigidi ezingama- $ 700 emazweni we-170 futhi itshale imali engaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 1 ocwaningweni, ukuthuthukiswa kanye nokuthengwa kwezimpahla ezivela ku-2014. Selokhu yasungulwa e1984, le nkampani ibiyimpahla eningi yabasunguli bayo abahlanu, abafowethu abakwaPortugal. www.bentley.com
Thumela Previous«Langaphambilini «EthicalGEO» - isidingo sokubuyekeza ubungozi bokuthambekela kwendawo
Post Next Omunye unyaka, enye ingqopha-mlando, okunye okuhlangenwe nakho okungajwayelekile… Lokho bekuyi-YII2019 kimi!Okulandelayo »